रबर कन्वेयर बेल्टको संयुक्त विधि
यहाँ THEMAX ले तपाईंलाई रबर कन्वेयर बेल्टको धेरै संयुक्त विधिहरू परिचय गराउनेछ। कन्वेयर बेल्ट प्रयोग गर्न सक्नु अघि यसलाई एउटा लूपमा जडान गर्नुपर्दछ। तसर्थ, कन्वेयर बेल्ट संयुक्तको गुणवत्ताले कन्वेयर बेल्टको सेवा जीवन र कन्वेयर लाइनको सहज अपरेशनलाई असर गर्दछ। कन्वेयर बेल्ट जोर्नीहरूका लागि सामान्य तरिकाले प्रयोग गरिएको मेकानिकल जोड्ने, चिसो-बन्धन जोड्ने र तातो-ज्वालामुखी जोड्ने।
I. कन्वेयर बेल्ट मेकानिकल संयुक्त विधि:
सामान्यतया बेल्टको बोकल जोड्को प्रयोगलाई जनाउँछ। यो संयुक्त विधि सुविधाजनक र आर्थिक छ, तर संयुक्त को दक्षता कम र क्षति गर्न सजिलो छ, जो कन्वेयर बेल्ट उत्पादनहरूको सेवा जीवनमा निश्चित प्रभाव गर्दछ। PVC र PVG सम्पूर्ण कोर फ्लेम-retardant एन्टिस्टेटिक कन्वेयर बेल्ट जोर्नीहरूमा, सामान्यतया ग्रेड 8 बेल्ट मुनिका उत्पादनहरूले यो संयुक्त विधि प्रयोग गर्छन्।
II. कन्वेयर बेल्ट चिसो सम्बन्ध संयुक्त विधि:
यसको मतलव यो जोड़को लागि चिसो सम्बन्ध चिपकने प्रयोग गरिएको छ। यो संयुक्त विधि मेकानिकल जोड्ने भन्दा बढी कुशल र किफायती छ, र यो राम्रो संयुक्त प्रभाव हुनुपर्छ। यद्यपि, व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट, किनकि प्रक्रिया शर्तहरू मास्टर गर्न अझ गाह्रो छ, र चिपकने गुणले संयुक्तमा ठूलो प्रभाव पार्छ। त्यसैले यो धेरै स्थिर छैन।
III.Conveyor बेल्ट थर्मल वल्कानाइजेसन संयुक्त विधि:
अभ्यास एक आदर्श संयुक्त विधि साबित भएको छ, जसले उच्च संयुक्त दक्षता सुनिश्चित गर्न सक्छ, र यो पनि धेरै स्थिर छ। संयुक्त को सेवा जीवन मास्टर गर्न को लागी धेरै लामो र सजिलो छ। जे होस्, त्यहाँ समस्याहरू जस्तै समस्यापूर्ण प्रक्रिया, उच्च लागत र लामो स्प्लिस्िंग समय, आदि हुन्।
रबर कन्वेयर बेल्ट उद्योगमा, बेल्ट स्प्लिingिंग सधैं एक ठूलो टाउको र समस्या निर्माता हो। तर अनुसन्धान र विकासमा कडा परिश्रम गरेर, THMAX यसको लागि राम्रो उत्पाद समाधान फेला पार्दछ। अब THMAX संयुक्त र splicing समस्या समाधान गर्न भित्रका मानिसहरूलाई मद्दत गरिरहन्छ।